Ikhosi ye-Autodesk 3ds Max-Geofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi ye-Autodesk 3ds Max
Funda i-Autodesk 3ds Max
I-Autodesk 3ds Max, sisoftware egqibeleleyo enikezela zonke izixhobo ezinokubakho zoyilo kuzo zonke iindawo ezinje ngokudlala, uyilo, uyilo lwangaphakathi kunye nabalinganiswa.
I-AulaGEO iveza ikhosi yayo ye-Autodesk 3ds Max, ukusuka kwindlela ye-AulaGEO, iqala ekuqaleni, ichaza ukusebenza kwesoftware, kwaye ngokuthe ngcembe ichaze izixhobo ezitsha kwaye yenze umthambo osebenzayo. Ekugqibeleni, umfundi uya kuba nakho ukwenza iprojekthi, eya kuphuhliswa ngokusebenzisa izakhono ezahlukeneyo ezifunyenwe kwinkqubo yokufunda. Le khosi iya kukubonelela ngezixhobo ezifanelekileyo zokuphucula izakhono zoyilo kunye nokwenza iiprojekthi ezikumgangatho ophezulu, kunye nokwandisa ipotifoliyo yakho yobungcali.
Uza kufunda ntoni?
Funda iikhonsepthi, funda izixhobo, ufake isicelo kwiiprojekthi
Yazi i-3ds Max yesoftware
Imiyalelo eyahlukeneyo oza kuyisebenzisa kwisoftware.
Iikhosi-3D Modeling Izifundo ze-3Ds Max
Ikhosi yeMicrostation-Funda uYilo lweCAD